ZOMA MASINA : – Madatopinfo
MISAOTRA ANAO IZAHAY RY TOMPO AMIN’NY EZAKY NY FITONDRANA HIARO ANAY AMIN’NY ARETI-MANDOZA SY NY EZAKY NY VAHOAKANAO MIADY AMIN’NY TSY RARINY SY NY TSINDRIHAZOLENA.
– Zoma Masina : Fankalazana ny Fitiavan’Andriamanitra ny olombelona tamin’ny alalan’ny nijaliana sy nahafatesan’i Jesoa Kristy izay sady olombelona no Andriamanitra. Anio ihany koa no manomboka ny vavaka hasivinandron’ny vavaka Famondrampon’Andriamanitra izay hifarana ny alahady aorian’ny Paka ny ho fankalazana izany.
– Enga anie mba hitondra famonjena ho anay any amin’ny Mandrakizay sy fahasambarana, fahasalamana ho anay ety an-tany ny Fitiavanao lehibe indrindra izay nahafoy ny ainao ho an’izao tontolo izao ampihorohoroan’ny coronavirus.
Andriamanitra ô, ny Fijalian’i Jesoa Kristy Tomponay no
nanafoananao ny fahafatesana lova nifandimbiasan’ny
taranaka rehetra noho ny fahotana tamin’ny fototra; koa
ataovy manahaka an’i Jesoa Kristy izahay mba ho toy ny
nitondranay tsy fidiny ny endriky ny tany niavianay no
handraisanay ny endriky ny lanitra noho ny hasin’ny
*VAKINTENY MASINA VOALOHANY*
Izao no tenin’ny Tompo: Indro fa hambinina ny Mpanompoko,
hitombo, hankalazaina ary ho tafasandratra indrindra. Toy ny
nigagan’ny maro nahita Azy, — fa rava Endrika loatra Izy, ka
ny Tarehiny efa hoatra ny tsy tarehin’olombelona intsony; ary
ny Tavany efa hoatra ny tsy tavan-janak’olombelona intsony,
— no hampiontanany firenena maro.
Hitampim-bava eo anatrehany ny mpanjaka, satria hahita ny
tsy mbola nolazaina taminy, sy handre ny tsy mbola reny. Iza
no nino izay renay, ary iza no nanehoana ny sandrin’ny
Tompo? Fa nisondrotra teo anatrehany Izy, tahaka ny hazo
madinika marefo, tahaka ny solofon-kazo mitsiry amin’ny
tany karankaina; tsy nanana endrika na hatsaran-tarehy
nanaitra ny masontsika; na bika namelona ny fitiavantsika.
Noesorina sy nilaozan’ny olona Izy, olona ory sady zatra ny
fijaliana; hoatra ny zavatra hisaronan’ny olona tava; natao
faneso sy tsy nahoantsika velively.
Marina tokoa fa ny aretintsika no nentiny, ary ny
fahoriantsika no nivesarany; ary isika anefa nijery Azy ho
olom-boasazy, nokapohin’Andriamanitra sy naetry. Kanefa Izy
nolefonina noho ny fahotantsika, notorotoroina noho ny
helotsika; nasiana ny famaizana nahazoantsika fihavanana;
ary ny ratra taminy no nahasitrana antsika. Efa mpaniasia toy
ny ondry avokoa isika, samy nanaraka ny lalany avy isika, ary
nazeran’ny Tompo taminy avokoa ny helotsika rehetra.
Vonoina Izy ary mandefitra, tsy miloa-bava akory Izy; tahaka
ny zanak’ondry entina hovonoina, tahaka ny ondry vavy eo
anatrehan’izay manety azy; tsy miloa-bava akory. Noesorina
Izy noho ny fampahoriana sy ny fitsarana; ary iza moa
tamin’ireo niara-belona taminy, no mba nihevitra fa
nofongorana eo amin’ny tanin’ny velona Izy, ary nozoin-doza
noho ny fahotan’ny vahoakako? Natao hiray fasana tamin’ny
ratsy fanahy Izy, ary eo amin’ny mpanan-karena nony efa
maty, nefa tsy mba nanao ny tsy marina, ary tsy mba nisy
fitaka teo am-bavany.
Sitraky ny Tompo ny nanorotoro Azy tamin’ny fijaliana, nefa
rehefa voaatitry ny fanahiny ny sorom-panonerana dia hahita
taranaka Izy, ho lava andro hiainana, ary hambinina eo an-
tanany ny hevitra nokasain’ny Tompo. Noho ny fijalian’ny
fanahiny, dia hahita Izy, ka ho afa-po. Ilay marina,
Mpanompoko noho ny fahalalany, hanamarina olona betsaka
ary ny Tenany hivesatra ny helok’ireo. Noho izany, homeko
anjara eo amin’ny lehibe Izy; ary hiara-mizara babo amin’ny
mahery; satria nanolotra ny ainy ho faty Izy sady natao
isan’ny mpanao ratsy; ary ny Tenany no hitondra ny
fahotan’ny maro, sady hanao fifonana ho an’ny mpanota.
— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Hisaorana anie
Ianao, ry Tompo, no ifefeko: tsy mba ho azon-kenatra aho.
Hanavotra ahy Ianao fa marina, apetrako an-tananao ny aiko,
ry Tompo Andriamanitra Mpanavotra ahy!
Ny rafiko rehetra mandatsa, ny miara-monina efa tofoka, ny
olom-pantatra tsiravina, izay tojo ahy mandositra avokoa;
hadinon’ny fo mova tsy ny maty aho, tsy asiana antony
ohatra ny fako.
Fa izaho, ry Tompo, mifefy aminao! Ianao, hoy aho, no
Andriamanitro, an-tananao ny androko, afaho amin’ny
Endrika mitsiky aseho ahy, vonjeo aho noho ny fitiavanao!
Mahereza! Ny fo hatanjaho, ianareo izay matoky ny Tompo!
*VAKINTENY MASINA FAHAROA*
Nianatra ny Fanekena Izy, ka tonga fototry ny famonjena ho
an’izay manaiky Azy.
Ry kristianina havana, noho isika manana Mpisorona lehibe
izay lasa namaky ny lanitra, dia i Jesoa Zanak’Andriamanitra,
dia aoka hotanantsika mafy ny finoana efa nekentsika. Satria
tsy mpisorombe tsy mahalala mangoraka ny fahalementsika
no antsika; fa efa nalaim-panahy tahaka antsika tamin’ny
zavatra rehetra Izy, afa-tsy ny fahotana. Koa aoka isika
hanatona ny fiketrahan’nybv fahasoavana amim-pitokiana, mba
hahazoantsika famindram-po, sy hahitantsika fahasoavana ary
hamonjena antsika amin’ny andro ilàntsika izany.
Fa tamin’ny andron’ny nofony i Kristy, nony nanolotra
fivavahana fifonana nombàm-pitarainana mafy sy ranomaso
be, tamin’ilay nahavonjy Azy tamin’ny fahafatesana, sady
nohenoiny noho ny fahatahorany an’Andriamanitra, dia
nianatra ny fanekena tamin’ny fahoriana niaretany, na dia
Zanaka aza; ary ankehitriny, efa tonga amin’izay fanaperana
Izy, ka tonga fototry ny famonjena mandrakizay ho an’izay
Nanolo-tena hanaiky hatramin’ny fahafatesana ho antsika ivv
Kristy, dia fahafatesana tamin’ny Hazofijaliana. Ho valin’izany
kosa, dia nasandratr’Andriamanitra ambony indrindra Izy, ary
nomeny Anarana mihoatra ny anarana rehetra.
*VAKITENY MASINA FAHATELO*
M. Tamin’izany andro izany, dia lasa i Jesoa sy ny mpianany
nankany andafin’ny riakan’i Sedrôna, izay nisy saha anankiray
nidiran’Izy sy ny mpianany. Fantatr’i Jodasy ilay namadika
Azy koa io toerana io, satria falehan’i Jesoa sy ny mpianany
matetika. Ka nony voarainy ny antoko-miaramila iray sy ny
mpiandry raharaha avy amin’ny lohandohan’ny mpisorona sy
ny Farisianina, dia nankao izy nitondra fanala sy fanilo ary
fiadiana. I Jesoa tamin’izany, dia efa nahalala rahateo izay
rehetra hanjo Azy, ka nitsena azy ireo sy nanao taminy hoe:
M. Eo koa izany i Jodasy ilay namadika Azy. Vao nilazan’i
Jesoa hoe: Izaho no Izy, dia nianòtra izy ireo ka niankarapoka
tamin’ny tany. Fa nanontany azy indray i Jesoa nanao hoe:
J. Efa voalazako taminareo fa Izaho no Izy; koa raha Izaho no
tadiavinareo, dia avelao handeha ireto.
M. Izy no nilaza izany dia ny mba hahatanteraka ny teny
voalazany hoe: “Tsy nisy very izay nomenao Ahy na dia iray
aza”. Ary nanan-tsabatra i Simôna Piera ka notsoahiny, dia
nasiany ny mpanompon’ny lehiben’ny mpisorona, ka afaka
tery ny sofiny an-kavanana. Malkosy no anaran’ilay
mpanompo. Fa hoy i Jesoa tamin’i Piera:
J. Ampidiro amin’ny tranony ny sabatrao; tsy hosotroiko va
ny kapoaka nomen’ny Ray Ahy?
M. Tamin’izay ny antoko-miaramila sy ny tompon’arivo ary ny
mpiandry raharaha nirahin’ny Jody, dia nisambotra an’i Jesoa
ka namatotra Azy. Tany amin’i Ana aloha no nitondrany Azy
fa io no rafozan’i Kaifa izay lehiben’ny mpisorona tamin’izany
taona izany. Ary i Kaifa kosa no nanome saina ny Jody hoe:
“Mahasoa raha maty ho an’ny vahoaka ny lehilahy
anankiray”. Nanaraka an’i Jesoa tamin’izany i Piera sy ny
mpianatra anankiray hafa, ary fantatry ny lehiben’ny
mpisorona ilay mpianatra anankiray, ka niara-niditra tamin’i
Jesoa tao antokotanin’ny lehiben’ny mpisorona. Fa i Piera
kosa nijanona tany ivelany tao akaikin’ny vavahady. Dia
nivoaka ilay mpianatra izay fantatry ny lehiben’ny mpisorona,
ka niteny tamin’ny vehivavy mpiandry vavahady, ary
nampiditra an’i Piera. Fa hoy ity ankizy vavy mpiandry
vavahady tamin’i Piera:
M. Nangatsiaka ny andro tamin’izay, ka nipetraka namindro
teo amin’ny afo ny mpanompo sy ny mpiandry raharaha, ary
dia mba niara-namindro taminy teo koa i Piera. Ary ny
lehiben’ny Mpisorona nanadina an’i Jesoa ny amin’ny
mpianany sy ny fampianarany, ka hoy i Jesoa namaly azy:
J. Niteny am-pahibemaso tamin’ny olona rehetra Aho, ary
nampianatra mandrakariva tao amin’ny sinagôga sy ny
Tempoly, izay ivorian’ny Jody rehetra, fa tsy nilaza na inona
na inona an-takona; ka ahoana no anontanianao Ahy? Ireo
nihaino Ahy no anontanio izay voalazako taminy, fa ireo no
mahalala izay nampianariko.
M. Nony nilaza izany i Jesoa dia nasian’ny mpiandry raharaha
anankiray tehamaina, sy nataony hoe:
J. Raha ratsy ny teniko, lazao izay ratsy; fa raha tsara ihany
kosa, nahoana no dia mamely Ahy ianao?
M. Dia nasain’i Ana nentina am-patorana ho any amin’i Kaifa
lehiben’ny mpisorona Izy. Ary i Simôna Piera nijanona
namindro teo koa, ka nisy nanao taminy hoe:
M. Dia hoy koa ny anankiray tamin’ny mpanompon’ny
lehiben’ny mpisorona izay havan’ilay notapahin’i Piera sofina:
M. Fa nandà indray i Piera, ary niaraka tamin’izay dia nian
akoholahy naneno. Dia nentiny niala tao amin’i Kaifa i Jesoa
ho any amin’ny tranon’ny Governora. Efa maraina ny andro
tamin’izay. Tsy niditra tao an-trano anefa izy ireo, fandrao
voaloto ka tsy afaka mihinana ny Paka. Koa i Pilaty no
nivoaka nanatona azy ireo teob alatrano, nanao hoe:
M. Izany no tonga dia mba hahatanteraka ny tenin’i Jesoa
momba ny fahafatesana hanjo Azy. Dia niditra tao an-trano i
Pilaty, ka niantso an’i Jesoa sy nanao taminy hoe:
J. Anao samy irery izany teny izany, sa an’olonkafa nilaza
V. Fa izaho angaha Jody? Ny firenenao sy ny mpisoronao no
nanolotra Anao tamiko, ka inona no nataonao?
J. Tsy anisan’izao tontolo izao ny Fanjakako: fa raha
anisan’izao tontolo izao ny Fanjakako, dia ho niady ny oloko,
ka tsy ho voarain’ny Jody Aho, fa tsy anisan’izao tontolo izao
J. Efa voalazanao, Mpanjaka Aho. Teraka Aho, sy tonga tety
an-tany mba hanambara ny marina, ka izay rehetra
mpanaraka ny marina, dia mihaino ny feoko.
M. Fa nony voalazany izany, dia nivoaka nankeo amin’ny
Jody indray izy ka nanao tamin’ireo hoe:
V. Raha izaho, dia tsy mahita izay helony na dia iray aza. Fa
araka ny fanao amin’ny Paka, dia mandefa olo-meloka izay
tianareo aho, koa tianareo ve ny handefasako ny
M. Kanefa jiolahy i Barabasy. Tamin’izay nalain’i Pilaty i
Jesoa ka nasainy nokapohina. Dia nandrandrana fehiloha tsilo
ny miaramila ka nasatrony ny lohany, ary nampitafiany
kapaoty jaky Izy. Raha efa izany, dia nanatona Azy izy ireo,
ka sady namely tehamaina Azy no nanao hoe:
V. Indro Izy entiko manketo aminareo, mba ho fantatrareo fa
tsy hitako mihitsy izay helony na dia iray aza.
M. Tamin’izay nivoaka i Jesoa nisatroka fehiloha tsilo sy
nitafy kapaoty jaky, ka hoy i Pilaty tamin’ny Jody:
M. Nony nahita Azy ny lohan’ny mpisorona sy ny mpiandry
raharaha, dia niantso nanao hoe:
V. Ento àry Izy, ka fantsihonareo, fa izaho tsy mahita izay
V. Manana lalàna izahay, ary araka ny lalànay, dia tsy
maintsy vonoina Izy, satria manao ny Tenany ho
M. Nandre izany i Pilaty, vao mainka natahotra. Ary niditra
tao an-trano indray izy, ka nanao tamin’i Jesoa hoe:
V. Izaho indray ve no tsy itenenanao? Tsy fantatrao angaha
fa sady manam-pahefana handefa Anao aho, no manam-
pahefana hamantsika Anao amin’ny Hazofijaliana koa?
J. Tsy hanam-pahefana amiko ianao, raha tsy nomena anao
avy any ambony izany, koa izay nanolotra Ahy taminao no
meloka kokoa noho ianao.
M. Hatramin’izay dia nitady handefa Azy i Pilaty. Fa
nantsointsoin’ny Jody hoe:
V. Raha mandefa an’io ianao, dia tsy mba sakaizan’i Sezara,
satria izay manao ny tenany ho mpanjaka dia mitsangan-
kanohitra an’i Sezara.
M. Nony nandre izany teny izany i Pilaty, dia nitondra an’i
Jesoa nivoaka, ka nipetraka teo amin’ny fitsarana, eo amin’ny
fitoerana atao hoe: Litôstrôtôs (lalam-bato), na Gabatha
amin’ny teny hebrio. Andro fiomanana amin’ny Paka
tamin’izay, ary tokony ho tamin’ny ora fahenina dia izao no
nolazain’i Pilaty tamin’ny Jody:
V. Dia hofantsihako amin’ny Hazofijaliana ve ny
M. Tamin’izay dia natolony azy hofantsihana i Jesoa, ka
noraisin’izy ireo Izy dia nentiny. Nentin’i Jesoa ny
Hazofijaliana, dia tonga teo amin’ny toerana atao hoe Kalvery
Izy (Ankarandoha), na hoe Gôlgôtà amin’ny teny hebrio. Teo
no namantsihany Azy tamin’ny Hazofijaliana, niaraka tamin’ny
roa lahy hafa koa izay nofantsihana teo an-daniny roa fa i
Jesoa teo ampovoany. Ary nanao soratra i Pilaty, napetany
teo andohan’ny Hazofijaliana, ka izao no vàkiny: JESOA AVY
ANY NAZARETA MPANJAKAN’NY JODY.
M. Betsaka ny Jody namaky io soratra io, fa akaikin’ny
tanàna ny toerana namantsihana an’i Jesoa, sady vita
tamin’ny teny hebrio sy grika ary latinina ny soratra. Ka hoy
ny mpisoron’ny Jody tamin’i Pilaty:
V Aza atao hoe mpanjakan’ny Jody, fa hoe: Izy nilaza hoe:
Mpanjakan’ny Jody Aho.
M. Rehefa voafantsiky ny miaramila tamin’ny Hazofijaliana
Izy, nalainy ny fitafiany ka nozarainy efatra, dia samy nanana
ny anjarany avy izy; toy izany koa ny akanjony rebareba.
Saingy tsy nizaitra kosa ny akanjony, fa tenona iray ihany,
hatrany ambony ka hatrany ambany, ka nifampilaza izy ireo
V. Aoka tsy horovitintsika ity, fa aoka hilokantsika, dia ho
lasan’izay hahazo ny loka.
M. Koa tanteraka tamin’izany ny Soratra Masina manao hoe:
Nozarainy ny fitafiako ary nilokany ny akanjoko. Dia izany no
nataon’ny miaramila. Ary nitsangana teo akaikin’ny
Hazofijalian’i Jesoa ny Reniny sy ny rahavavin-dreniny, dia i
Maria vadin’i Kleofasy ary i Maria Madalenina. Nony hitan’i
Jesoa ny Reniny sy ilay mpianany malalany nitsangana teo
akaikiny, dia hoy Izy tamin-dreniny;
M. Ka hatramin’izay dia noraisin’ilay mpianatra ho any aminy
izy. Nony afaka izany, dia fantatr’i Jesoa, fa efa tanteraka ny
zavatra rehetra, ka hoy Izy, mba hahatanteraka ny Soratra
M. Ary nisy bakoly feno vinaingitra kosa teo, ka nalainy ny
spônjy, novontosana vinaingitra, sy notohizana tamin’ny hazo
hisôpy, dia natohoka teo am-bavany. Vao nanandrana ny
vinaingitra Izy, dia nanao hoe:
M. Ary andro fiomanana tamin’izay, ka nangataka tamin’i
Pilaty ny Jody, mba hotapahina ny ranjon’izy ireo, dia
hoesorina, mba tsy hisy faty mihantona amin’ny hazofijaliana
amin’ny andro sabata (fa andro lehibe izany sabata izany).
Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjon’ny voalohany,
sy ny an’ilay anankiray niara-nofantsihana taminy koa; fa
nony nankeo amin’i Jesoa izy ireo, dia hitany fa efa maty
sahady Izy, ka tsy mba notapahiny ny ranjony. Fa
nolefonin’ny miaramila anankiray kosa ny Fony, ka nisy ra sy
rano nivoaka niaraka tamin’izay. Ary ilay nahita no milaza, ka
marina ny filàzany, sady fantany fa milaza ny marina izy, mba
hinoanareo koa. Ary izany no tonga dia mba hahatanteraka ny
Soratra Masina hoe: “Tsy hisy hotapahina ny taolany, na dia
iray aza”. Ary hoy indray koa ny Soratra Masina: “Hijery izay
nolefonina izy”. Rehefa afaka izany, i Jôsefa avy any
Arimatia, izay mpianatr’i Jesoa an-tsokosoko, noho ny
fahatahorany ny Jody, dia nangataka tamin’i Pilaty, mba haka
ny fatin’i Jesoa, ka neken’i Pilaty izany. Dia lasa izy naka ny
fatin’i Jesoa. Ary tonga koa i Nikôdema, ilay nanatona an’i
Jesoa nony alina, tamin’ny voalohany, nitondra mira sy alôesy
nampifangaroina, tokony ho zato livatra. Koa nalainy ny fatin’i
Jesoa, dia nasiany zava-manitra, sy nofonosiny lamba araka
ny fanaon’ny Jody amin’ny fandevenana. Nisy saha anankiray
kosa teo amin’ny toerana namantsihana an’i Jesoa, ary nisy
fasana vaovao tsy mbola nandevenana olona tao anatin’ilay
saha. Ka noho ny maha-andro fiomanan’ny Jody tamin’izay,
dia tao no nandevenany an’i Jesoa, satria akaiky ny fasana..
Izany àry ka ankalazako ny Tenin’ny Tompo…dera anie ho
Anao ry Kristy
Ny Teny voalazan’ny Vaovao Mahahaly teo anie hanafaka ny
»Efa madio hianareo izao, noho ny fampianarana nataoko
taminareo » Md Joany 15,3